किन ब्याजदर परिवर्तनमा बैंकहरूको मनपरी चल्छ ? राष्ट्र बैंकले कसरी कस्दैछ पाता ? » aarthikplus
किन ब्याजदर परिवर्तनमा बैंकहरूको मनपरी चल्छ ? राष्ट्र बैंकले कसरी कस्दैछ पाता ?
वि.सं.२०७८ असोज २६ मंगलवार ०८:३३
नियमविपरीत केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याजदर बढाएको राष्ट्र बैंकले फेला पारेको छ । तरलता अभाव देखाउँदै निक्षेपको ब्याजदर बढाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाले राष्ट्र बैंकको निर्देशन उल्लंघन गरी कर्जाको ब्याजदर बढाएको भेटिएको हो । ‘केही बैंकहरूले प्रिमियम बढाएको, तीन महिनाअघि नै कर्जाको ब्याज बढाएको र विदेशी मुद्राको नक्कली निक्षेप देखाएको भेटिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘त्यस्ता गतिविधि रोक्न ती बैंकलाई पहिलो चरणमा नौतिक दबाब दिएका छौं । अझै पनि अटेरी गरे थप स्पष्टीकरण सोध्छौं ।’
किन ब्रोकरले मार्जिन कारोबार सुविधा दिन सकेनन् ? के छ गुदी कुरा ?
हिरो मोटोकर्पले माएस्ट्रो एज ११० सार्वजनिक